प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीकाे दौड : युवाकै बोलवाला
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको चुनाव नजिकिएसँगै सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको दौड पनि शुरु भएको छ । यो दौडमा युवाकै बोलवाला
प्रदेश १ मा मुख्यगरी प्रमुख दल कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, संघीय फोरम र राप्रपाले आफ्ना उम्मेदवारको लामो सूची पार्टीको जिल्ला तहमा पठाएका छन् ।
प्रदेश १ मा चुनावी सरगर्मी शुरु भएसँगै प्रतिनिधिसभाका साथमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको चर्चासमेत शुरु भएको छ । खासगरी ठूला दलका युवापंक्तिका नेताले मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छन् । कांग्रेस र एमालेबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने अड्कल गरिएको यो प्रदेशमा कांग्रेसका तर्फबाट युवा नेता गुरुराज घिमिरेलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा हेरिएको छ । घिमिरे मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ बाट प्रदेशसभाका लागि सिफारिसमा परेका छन् । घिमिरे भन्छन्, ‘मैले प्रदेशसभालाई जनउत्तरदायी, प्रभावकारी, विकास तथा प्रगतिको मार्गमा अगाडि बढाउने माध्यमको रूपमा लिएको छु ।’ प्रदेश मुख्यमन्त्रीको रूपमा काम गरेर कांग्रेसका एजेन्डालाई व्यवहारतः पूरा गराउने लक्ष्य राखेर घिमिरे चुनावको तयारीमा होमिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव एकैपटक भइरहेको छ । विगतको शासन प्रणालीको अभ्यास गरेको परम्परागत प्रतिनिधिसभा अब नरहेको र त्यो संसदीय व्यवस्थासमेत सकिएकोले पार्टीका युवापुस्ताका नेता पहिले प्रदेशमै राजनीति गर्ने योजना बुन्न थालेका छन् । घिमिरेले भने, ‘एकै दलको बहुमत केन्द्र र प्रदेशमा नआउने भएकाले अब दलहरू मिलेरै विकास र प्रगतिमा अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
मुख्यमन्त्रीको रूपमा अर्का युवा नेता विश्वप्रकाश शर्माको चर्चा थियो । तर, शर्मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उठ्न झापाबाट सिफारिसमा परिसकेका छन् । शर्मा उता गएपछि घिमिरे आफ्नो पार्टीबाट यो दौडमा एक्लै छन् ।
प्रदेश १ लाई सम्पन्न र विकसित बनाउन म सक्षम छु। गोपाल किराँती नेता, माओवादी केन्द्र
एमाले र माओवादीको गठबन्धनअघि गोपाल किराँतीलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा अघि सारिएको थियो । किराँती माओवादीका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बन्ने योजनासाथ पार्टीले आफ्ना सम्भावित कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको थियो । पार्टीको विराटनगरमा सम्पन्न प्रदेशस्तरीय भेलाले किराँतीको नाम केहीअघि मात्र मुख्यमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यतिवेला किराँतीले भनेका थिए, ‘मेरो नेतृत्वमा यो प्रदेशलाई सम्पन्न र विकसित बनाउन म सक्षम छु ।’
एमालेसँगको गठबन्धनपछि भने पार्टीका केन्द्रीय सचिव भीम आचार्य र अर्का नेता पूर्वसञ्चारमन्त्री शेरधन राई पनि मुख्यमन्त्रीको दौडमा छन् । सुनसरीसहित तराई/मधेशमा जिल्लामा दोस्रो चरणअन्तर्गत २१ मंसिरमा चुनाव हुने भएकोले नेता भीम आचार्य सुनसरीको इनरुवाबाट प्रदेशसभाको टिकटको प्रतीक्षामा छन् । उता राई भोजपुरबाट प्रदेशसभाका लागि उम्मेदवार छनोट भइसकेका छन् । यद्यपि, प्रदेशसभाको मुख्यमन्त्रीमा को जाने भन्ने पार्टीले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । एमाले सचिव योगेश भट्टराईलाई मुख्यमन्त्रीको दह्रो उम्मेदवारको रूपमा हेरिएको थियो । उनी आफैं पनि मुख्यमन्त्रीमा जान तयार रहे पनि ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनेसँगै भट्टराईको मुख्यमन्त्री दौडमा पूर्णविराम लागेको छ ।
आन्दोलन, विवाद, मधेश मुद्दा र सीमा जोडिएका कारण राष्ट्रिय राजनीतिमा सदैव चर्चा र चासोको विषय हुने प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्रीको चर्चा शुरु भएको छ । यस प्रदेशमा मुख्य पार्टीसँगै मधेश आन्दोलबाट जन्मिएको राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि मुख्यमन्त्रीको दाबेदारीमा छ ।
त्यसो त प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म खुलेर कहीँ कुनै पार्टीले मुख्यमन्त्रीको दाबेदारको विषयमा आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेका छैनन्, तर पनि पार्टीका नेता–कार्यकर्ता तथा जानकारहरूबाट भने चर्चा शुरु भइसकेको छ ।
कांग्रेसबाट हालका खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री महेन्द्र यादव, कृषिमन्त्री रामकृष्ण यादव, धनुषा जिल्ला सभापति रामसरोज यादव र फरमुल्ला मन्सुरको नाम मुख्यमन्त्री पदका लागि चर्चामा छ ।
त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीको आकांक्षीको रूपमा यस क्षेत्रका प्रभावशाली नेता मातृका यादवको नाम पनि सुनिएको छ । एमालेको तर्फबाट पोलिटब्युरो सदस्य रघुवीर महासेठ र शत्रुघ्न महतोको नाम चर्चामा छ । एमाले धनुषाले प्रतिनिधिसभाको लागि क्रमशः महासेठ र महतोको नाम धनुषा ३ र ४ बाट सिफारिस गरेको छ ।
यता, स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रदेश नम्बर २ मा राम्रो मतपरिणाम प्राप्त गर्न सफल भएको राजपा नेपालका तर्फबाट केन्द्रीय नेताहरूकै नाम मुख्यमन्त्रीका आकांक्षीको रूपमा आएको छ । जसमा राजपा अध्यक्षमण्डलका महेन्द्रराय यादव र राजेन्द्र महतोको नाम निकै चर्चामा छ । राजपाले मधेश आन्दोलनको सहानुभूतिको आधारमा मुख्यमन्त्री पदलाई आफ्नो पोल्टोमा पार्न सक्ने आकलनसमेत भइरहेको छ ।
राजधानी काठमाडौंसहित हिमाल, पहाड समेटिएको प्रदेश ३ मा एमाले र कांग्रेसबाटै मुख्यमन्त्री हुने देखिन्छ । प्रदेशको मुख्यमन्त्री दोस्रो तहका नेताभन्दा केन्द्रीय नेताको पोल्टामा पर्ने आकलन गर्न थालिएको छ । एमालेले केही दिनअघि मात्र मुख्यमन्त्रीमा पार्टी उपाध्यक्ष तथा पार्टीको प्रदेश ३ प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई अगाडि सारेको छ ।
कहीँ कुनै पार्टीले मुख्यमन्त्रीको दाबेदारको विषयमा आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेका छैनन्, तर चर्चा शुरु भइसकेको छ।
एमाले प्रचार विभाग सचिव विष्णु रिजालका अनुसार पार्टीबाट राजेन्द्र पाण्डे, पशुपति चौलागाई, अरुण नेपाल तथा सानु श्रेष्ठ पनि सम्भावित मुख्यमन्त्रीका रूपमा छन् । पाण्डेले धादिङ ‘क’ बाट, चौलागाईले दोलखा २ बाट, नेपालले सिन्धुपाल्चोक १ ‘ख’ बाट प्रदेशसभा सदस्यका लागि मनोनयन पत्र दर्ता गरेको र श्रेष्ठ काठमाडौंको क्षेत्र नं. २ बाट दर्ता गर्ने क्रममा छन् ।
माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री हितबहादुर तामाङले एमालेसँग तालमेल गरेका कारण प्रदेश ३ मा माओवादीले मुख्यमन्त्रीको दाबी नगर्ने प्रस्ट्याए । उता माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलले पनि प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्री हुने आकांक्षा देखाएका छन् । उनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा माओवादीभित्र छलफल भइरहेको जनाइएको छ ।
कांग्रेसभित्र भने मुख्यमन्त्रीको दौडमा पार्टीभित्रै प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । पार्टीबाट आधा दर्जनभन्दा बढी मुख्यमन्त्रीका दाबेदार देखिएकोमा युवा नेता गगन थापा अगाडि छन् । थापाले प्रदेश ३ लाई केन्द्रमा राखेर चुनावी अभियान थालिसकेका छन् । उनले पार्टी नेतृत्वसमक्ष आफूलाई मुख्मन्त्रीका रूपमा अघि सारिए प्रदेशसभा निर्वाचनमा आउन तयार रहेको जनाउसमेत दिइसकेका छन् ।
प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारिए म प्रदेशसभामा चुनाव लड्न तयार छु। डिल्लीबहादुर चौधरी राज्यमन्त्री, कांग्रेस
प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्रीमा पूर्वसांसद जगदीश्वरनरसिंह केसी पनि दाबेदार हुन् । उनी लगातार दुई पटक सांसद तथा तीन पटक नुवाकोट पार्टी सभापति भइसकेका छन् । उनी पार्टी केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवाले मुख्यमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएपछि नुवाकोटको क्षेत्र नं. २ को प्रदेश १ मा उम्मेदवारी दिएको बताउँछन् ।
प्रदेश ३ मा वामगठबन्धनको बहुमत आउने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । स्थानीय चुनावमा एमाले पहिलो शक्ति बनेको छ । अब एमाले–माओवादी एक भएको कारण कांग्रेसलाई चुनाव जित्न निकै मुस्किल हुनेछ ।’ माओवादी केन्द्रीय सदस्य विमला सुवेदी आउँदो निर्वाचनमा यो प्रदेशबाट दुई ठूला दल एक भएकाले आफूहरूले नै प्रदेशमा पहिलो सरकार बनाउने दाबी गर्छिन् ।
ऐतिहासिक नुवाकोटलाई प्रदेश ३ को राजधानी बनाउनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । प्रदेश ३ को एक सय १९ तहको निर्वाचन परिणामअनुसार ६४ स्थानीय तहका प्रमुख जितेर एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । कांग्रेस ३५ र माओवादी केन्द्रले १७ स्थानमा विजयी भएको छ ।
पर्यटनमन्त्री भइसकेका एमाले नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ५ कात्तिकमा लमजुङबाट प्रदेश ‘ख’ मा सांसदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराए । एमालेको सचिव र संगठन विभाग प्रमुखसमेत रहेका उनलाई एमालेले प्रदेश ४ को मुख्यमन्त्रीको रूपमा प्रदेश सांसदतिर पठाएको चर्चा छ । माओवादीसँगको गठबन्धनकै कारण एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेको लमजुङमा संघीय सांसदका लागि माओवादीका नेता देव गुरुङ संयुक्त उम्मेदवार बनेका छन् ।
प्रदेश ‘ख’का उम्मेदवारसमेत रहेका एमाले लमजुङका अध्यक्ष धनञ्जय दवाडी पृथ्वी सुब्बा प्रदेश प्रमुख बन्न सक्ने क्षमताका नेता भएकाले प्रदेश सांसदमा पार्टीले उठाएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘वाम गठबन्धनले प्रदेश ४ मा जित्छ पनि र उहाँ प्रदेश प्रमुख पनि बन्नुहुन्छ ।’
एमालेका युवा नेता रवीन्द्र अधिकारीलाई पनि यो प्रदेशको प्रमुखको प्रमुख दाबेदारका रूपमा हेरिएको छ । तर उनलाई एमाले कास्कीले क्षेत्र नं २ बाट संघीय सांसदको उम्मेदवारका लागि सिफारिस गरेको छ । उनी प्रमुख बन्न पाउने विश्वास पार्टीले दिलाए प्रदेशमा लड्न तयार छन्, तर पार्टीमा आफूभन्दा वरिष्ठ नेताहरू त्यो मैदानमा आइसकेको हुँदा त्यताको सम्भावना टरेको ठानेर संघीय सांसद्कै मनस्थितिमा छन् ।कांग्रेसमा प्रदेश प्रमुखका आकांक्षी थुप्रै छन् । तर अहिलेसम्मको उम्मेदवारी दर्तामा त्यस्ता नेता परिसकेका छैनन् । १ कात्तिककोे उम्मेदवारीपछि मात्रै केही छनक देखिन सक्ने देखिन्छ । कांग्रेसका हेभिवेट नेताहरू धेरैले संघीय सांसद नै ताकेका छन् । प्रदेश ४ मै निर्वाचन क्षेत्र पर्ने महामन्त्री शशांक कोइराला पूर्वीनवलपरासीबाट संघीय सांसदका लागि पार्टीभित्र सिफारिसमा परेका छन् । नेता रामचन्द्र पौडेल तनहुँबाट र अर्का नेता गोपालमान श्रेष्ठ स्याङ्जाबाट सिफारिसमा परेका छन् । उनीहरू कसैको पनि आकांक्षा प्रदेशमा नभएपछि अरू नेताहरू भने प्रदेश प्रमुख दिने विश्वास दिलाएमात्रै प्रदेशसभामा उम्मेदवारी दिने मनस्थितिमा देखिन्छन् । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुन जोशी भन्छन्, ‘रामचन्द्र, शशांक र गोपालमानहरूपछिको नेता यो प्रदेशमा मै हो, प्रमुख दिन्छन् भने प्रदेशमा पनि लड्न तयार छु, नभए संघतिर जाने हो ।’
कांग्रेस नेता धनराज गुरुङ स्याङ्जाबाट संघीय सांसद्मै लड्ने ताकमा छन् । भन्छन्, ‘पहिला पनि केन्द्रकै सांसद भइयो, फेरि प्रदेशमा आयो भने केन्द्रमा पनि उही, प्रदेशमा उही भन्ने साथीहरूको कुरा आउला, त्यसैले पहिलाजस्तै केन्द्रमै जाने हो ।’ २ निर्वाचन क्षेत्र रहेको स्याङ्जामा गोपालमान श्रेष्ठले छाडेको क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धामा उत्रन आफू तयार रहेको उनको भनाइ छ । कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेल तनहुँबाट संघीय सांसदको आकांक्षी छन् । तर पनि प्रदेश प्रमुखकै जिम्मेवारी दिने विश्वास पाए प्रदेशमै उम्मेदवार बन्न उनी तयार देखिन्छन् । तनहुँको क्षेत्र नं १ मा नेता रामचन्द्र पौडेल उम्मेदवार बन्ने पक्कापक्की भएकैले उनी २ नं क्षेत्रका आकांक्षी भएका हुन् । प्रदीप संघीय सांसदका लागि पार्टीबाट आफ्नो क्षेत्रमा सर्वसम्मत सिफारिस भएका छन् ।
तनहुँ २ नम्बरको ‘ख’मा एमालेको प्रदेश संयोजक तथा पूर्वमन्त्री किरण गुरुङ पार्टीबाट सिफारिसमा परेका छन् भने कांग्रेसका युवा नेता ध्रुव वाग्लेले उनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्भावना छ । व्यास नगरपालिकाको मेयर भइसकेका प्रखर वक्ता वाग्लेलाई कांग्रेसबाट प्रदेश प्रमुख बन्न सक्ने सम्भावित नेताहरूका रूपमा पनि हेरिएको छ । प्रदेशबाट कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य जितेका गोरखाका सुरेन्द्र पाण्डेले भने संघ र प्रदेश कतै पनि टिकट पाएनन् ।
एमालेबाट पृथ्वी सुब्बा गुरुङबाहेक तनहुँमा प्रदेशसभा निर्वाचन लड्ने तरखरमा रहेका किरण गुरुङलाई पनि प्रदेश प्रमुखका रूपमा हेरिएको छ । त्यसपछिका अर्का नेता पर्वतका गणेश तिमिल्सिना हुन् । पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य उनी पर्वतमा ‘क’ र ‘ख’ दुवै क्षेत्रबाट उम्मेदवार बन्न सिफारिसमा परेका छन् । गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रदेश ४ का ८५ तहमध्ये ४४ मा कांग्रेस, ३५ मा एमाले र ५ का प्रमुखमा माओवादीले जितेको थियो ।
केन्द्रीय राजनीतिमा पहुँच भएका हेभिवेट नेता प्रतिनिधिसभामा नै केन्द्रित भएपछि ५ नम्बर प्रदेशमा मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने चर्चा चुलिएको छ । कांग्रेसको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीको रूपमा हेरिएका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्रीहरू बालकृष्ण खाँण, दीपक गिरी, केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारी, पुष्पा भुषाल, भरतबहादुर शाह प्रतिनिधिसभामा जाने भएपछि कांग्रेसभित्र को मुख्यमन्त्री बन्ने भन्ने छलफल शुरु भएको छ ।
कांग्रेसले अहिले मुख्यमन्त्रीको रूपमा वर्तमान श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी र पूर्वगृहराज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलको नाम अघि सारेको बुझिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारिए आफू प्रदेशसभामा चुनाव लड्न तयार भएको राज्यमन्त्री चौधरीले बताए ।
एमालेमा पनि मुख्यमन्त्री को भन्ने चर्चा पाइरहेको छ । एमालेबाट मुख्यमन्त्रीको रूपमा हेरिएका शंकर पोखरेल, विष्णु पौडेल, युवराज ज्ञवाली, घनश्याम भुषाललगायत नेताहरू केन्द्रमा नै जाने भनेपछि एमाले प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्रीको लागि तीन जनाको नाम अघि सारेको छ । एमालेले दाङका महेश चौधरी, नवलपरासीका वैजनाथ चौधरी र पाल्पाका दलबहादुर रानालाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा अघि सार्ने तयारी गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रले भने गठबन्धनको निर्णयबाट मात्रै मुख्यमन्त्री तोकिने बताएको छ । केन्द्रीय सदस्य निर्मल आचार्यका अनुसार सम्भावना बोकेका नेताहरू केन्द्रमा गइसकेको भन्दै अन्यको लागि निर्णय नभएको बताए । माओवादीभित्र मुख्यमन्त्रीको रूपमा रोल्पाबाट प्रदेशसभामा चुनाव लडेका कुलबहादुर केसी (सोनाम), रुकुमबाट चुनाव लडेका पूर्ण घर्ती, प्यूठानबाट चुनाव लडेका कृष्णध्यज खडका, बर्दियाका विष्णु चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा हेरिएको आचार्यले बताए । यी सबै पार्टीका केन्द्रीय तथा पोलिटब्युरो सदस्य हुन् ।
(कुमार लुइँटेल/विराटनगर, मनिका झा/जनकपुर, देवचन्द्र भट्ट/नुवाकोट, केशवशरण लामिछाने/पोखरा र गोपाल शर्मा भट्टराई/दाङ)